Nzuzo / Usoro ojiji |
Home » Nzuzo / Usoro ojiji
Okwu nke Service:
Ndị na-esonụ usoro na ọnọdụ eduzi ihe nile ojiji nke coronationcasino.com website na ọdịnaya niile, ọrụ na ngwaahịa dị na ma ọ bụ site na website (e ọnụ, ndị weebụsaịtị). The weebụsaịtị ekesịpde na ejikwara site echichi Casino - GlobaliGaming (& Quot; echichi Casino & quot;). The weebụsaịtị-awa n'okpuru gị nabata-enweghị mgbanwe nke niile nke usoro na ọnọdụ ndị e dere n'isiokwu a na ndị ọzọ nile na-arụ ọrụ iwu, atumatu (na nsonye, enweghị mmachi, Echichi Casino si Amụma nzuzo) na usoro nke a na-ebipụta site n'oge ruo n'oge on a Site site echichi Casino (ịgụnye, na & quot; Agreement & quot;).
Biko gụọ a Agreement ọma tupu ịnweta ma ọ bụ iji weebụsaịtị. Site na ịnweta ma ọ bụ iji bụla nke saịtị weebụ, ị na-ekweta na-afụ opi site usoro na ọnọdụ nke a nkwekọrịta. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na ihe niile usoro na ọnọdụ nke a nkwekọrịta, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta weebụsaịtị ma ọ bụ jiri ihe ọ bụla ọrụ. Ọ bụrụ na ndị aa chọrọ na-ahụta ihe na-enye site echichi Casino, a nara expressly ejedebeghị na usoro ndị a. The weebụsaịtị dị naanị mmadụ ndị nwere dịkarịa ala 18 afọ.
Gị coronationcasino.com Account na saịtị. Ọ bụrụ na ị mepụtara a blog / saịtị ahụ na weebụsaịtị, ị na-ahụ maka ịnọgide na-enwe nche nke akaụntụ gị na blog, na ị bụ n'ụzọ zuru ezu maka eme na-eme n'okpuru akaụntụ na ihe ọ bụla ọzọ na- eme na njikọ na blog. Unu na-agaghị na-akọwa ma ọ bụ na-ekenye Keywords gị blog na a na-eduhie eduhie ma ọ bụ na iwu akwadoghị n'ụzọ, gụnyere na a n'ụzọ bu n'obi ahia na aha ma ọ bụ aha nke ọzọ, na echichi Casino nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ wepụ ihe ọ bụla nkọwa ma ọ bụ isiokwu na ọ weere na-ekwesịghị ekwesị ma ọ bụ na iwu akwadoghị, ma ọ bụ na uzọ ọzọ yiri ka ime ka echichi Casino liability. Ị ga-ozugbo gwa echichi Casino nke ọ bụla n'enweghị ikike ojiji nke gị blog, akaụntụ gị ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gbawara agbawa obi iru ala. Echichi Casino-agaghị dara iwu maka ihe ọ bụla omume ma ọ bụ omissions site Ị, gụnyere ọ bụla emebi obosara nke ụdị ọ bụla niile metere ka a n'ihi nke ike dị otú ahụ ma ọ bụ omissions.
Ibu ọrụ nke ndị nnyemaaka. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ a blog, aza ajụjụ na a blog, biputere ihe onwunwe ka weebụsaịtị, post njikọ na ndị weebụsaịtị, ma ọ bụ n'ụzọ ime (ma ọ bụ kwe ka ọ bụla ọzọ mee ka) ihe onwunwe dị site n'ọnụ ndị weebụsaịtị (ọ bụla dị otú ahụ ihe onwunwe, & Quot; Content & quot;), Ị na-ahụ maka ọdịnaya nke, na ihe ọ bụla nsogbu n'ihi, na Content. Nke ahụ bụ ikpe n'agbanyeghị ma Content na ajụjụ kasị ederede, ndịna, ọdịyo faịlụ, ma ọ bụ kọmputa software. Site na-eme Content dị, ị na-anọchi anya na akwukwo ikpe na:
na nbudata, Iṅomi na ojiji nke Content agaghị imegide ikike ime nhọrọ ndị proprietary ikike, gụnyere ma na ọnweghị oke na nwebisiinka, patent, ụghalaahịa ma ọ bụ ahia nzuzo ikike, nke ọ bụla ọzọ;
ma ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ nwere ikike ka arịa amamihe ị mepụtara, ị ma (i) natara ikike n'aka onye were gị n'ọrụ ka biputere ma ọ bụ mee dị Ọdịnaya, gụnyere ma na ọnweghị oke ọ bụla software, ma ọ bụ (ii) nwetara site were gị n'ọrụ a waiver ka ikike niile dị na ma ọ bụ na Content;
i n'ụzọ zuru ezu kwetara na ọ bụla atọ ọzọ ikikere metụtara ndị Content, na meworo ihe nile dị mkpa iji ịga nke ọma gabiga agwụ ọrụ ọ bụla chọrọ okwu;
Ọdịnaya anaghị nwere ma ọ bụ wụnye ọ bụla nje, ikpuru, malware, Trojan ịnyịnya ma ọ bụ ndị ọzọ na-emerụ ma ọ bụ na-ebibi ọdịnaya;
Ọdịnaya bụ spam, abụghị igwe- ma ọ bụ enweghị usoro-eme, na anaghị nwere unethical ma ọ bụ na-achọghị azụmahịa ọdịnaya e mere iji ụgbọala okporo ụzọ nke atọ saịtị ma ọ bụ mbo mbuli search engine rankings nke ọzọ na saịtị, ma ọ bụ ka n'ihu na iwu akwadoghị omume (dị ka phishing) ma ọ bụ na-eduhie ndị nnata dị ka isi iyi nke ihe onwunwe (dị ka spoofing);
Ọdịnaya adịghị akpali agụụ mmekọahụ, anaghị nwere egwu ma ọ bụ kpalie ime ihe ike n'ebe ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ entities, na emebighị ihe ndị dịịrị nanị ma ọ bụ ọha ikike nke ọ bụla ọzọ;
gị blog na-agaghị na-advertised site na-achọghị electronic ozi dị ka spam njikọ na newsgroups, email anatara, ọzọ blọọgụ na ebe nrụọrụ weebụ, na yiri unsolicited e nkwado ụzọ;
gị blog na-adịghị aha ya bụ n'ụzọ na-eduhie gị na-agụ n'ime eche na ị onye ọzọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ọmụmaatụ, gị blog si URL ma ọ bụ aha bụ aha onye ọzọ karịa onwe gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ karịa gị onwe gị; na
ị nwere, na ihe banyere Content na-agụnye kọmputa koodu, n'ụzọ ziri ezi categorized na / ma ọ kọwara ụdị, ọdịdị, -eji na mmetụta nke ihe, ma a sị ya gaa site echichi Casino ma ọ bụ n'ụzọ.
Site n'ido Content ka echichi Casino n'ihi na Nsonye na gị weebụsaịtị, ị nye echichi Casino a n'uwa na-, eze-free, ma na-abụghị nanị ikike mụta nwa, gbanwee, imeghari na-ebipụta Content naanị n'ihi na o of egosipụta, -ekesa na-akwalite gị blog. Ọ bụrụ na ị ihichapụ Content, Echichi Casino ga-eji ezi uche mgbalị iji wepụ ya si weebụsaịtị, ma ị na-ekweta na caching ma ọ bụ ndị zoro aka na Content wee ghara mere ozugbo ọ dịghịzi adị.
-Enweghị ịmachi ọ bụla n'ime ndị ihe oyiyi ma ọ bụ warranties, Echichi Casino nwere ikike (ezie na ọ bụghị ọrụ) ka, na echichi Casino si naanị ezi uche (i) ajụ ma ọ bụ wepụ ihe ọ bụla ọdịnaya nke, na echichi Casino si ezi uche na uche, -emegide iwu ọ bụla echichi Casino iwu ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla na-emerụ ma ọ bụ ifọnke, ma ọ bụ (ii) chupu ma ọ bụ agọnahụ ohere na na ojiji nke weebụsaịtị ọ bụla onye ma ọ bụ agabiga mbara igwe n'ihi ihe ọ bụla, na echichi Casino si naanị ezi uche. Echichi Casino ga-ọ dịghị ọrụ na-enye a nkwụghachi nke ọ bụla ichekwa na mbụ ugwo.
Ugwo na Renewal.
Site na-ahọpụta a ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ, ị na-ekweta ịkwụ ụgwọ echichi Casino na otu oge na / ma ọ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ ndenye aha ụgwọ gosiri (ọzọ ụgwọ okwu nwere ike itinye ná nkwukọrịta ndị ọzọ). Ndenye aha ịkwụ ụgwọ ga-ebubo on a tupu akwụ ndabere na n'ụbọchị ị banye maka nweta nkwalite na-ekpuchi ojiji nke na ọrụ n'ihi na a kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ ndenye aha oge dị ka e gosiri. Ịkwụ ụgwọ na-adịghị refundable.
Ọ bụrụ na ị gwa echichi Casino tupu ọgwụgwụ nke na ọdabara ndenye aha oge na ị chọrọ iji kagbuo a na ndenye aha, na ndenye aha gị ga-akpaghị aka eme na ị anyị ikike iji nakọta mgbe ahụ-na ọdabara kwa afọ ma ọ bụ kwa ọnwa ndenye aha ego maka ndị dị otú ahụ na ndenye aha (nakwa dị ka ọ bụla ụtụ isi) eji ihe ọ bụla kaadị ma ọ bụ ndị ọzọ na ugwo usoro anyị nwere on ndekọ n'ihi na ị. Upgrades pụrụ ịkagbu n'oge ọ bụla site n'ido gị arịrịọ ka echichi Casino na dere.
ụgwọ; Ịkwụ ụgwọ. Site na ịbanye elu maka a Services akaụntụ ị na-ekweta ịkwụ ụgwọ echichi Casino na ọdabara ntọlite ​​ụgwọ na ugboro ugboro ụgwọ. Na ọdabara ụgwọ a ga-invoiced malite na ụbọchị gị ọrụ e hiwere ma na tupu nke na-eji dị otú ahụ ọrụ. Echichi Casino mee ikike ịgbanwe ugwo usoro na ụgwọ n'elu iri atọ (30) ụbọchị tupu e dere, mara na i. Services pụrụ ịkagbu site ị na oge obula na iri atọ (30) ụbọchị e dere, mara echichi Casino.
nkwado. Ọ bụrụ na gị ọrụ na-agụnye ohere mkpa email support. & Quot; Email support" pụtara inwe ike ime arịọ maka oru nkwado aka site email n'oge ọ bụla (na itinye ezi mgbalị site echichi Casino ime n'ime otu ụbọchị azụmahịa) banyere ojiji nke Ndị Ukwuu Services. & Quot; Ibu ụzọ" pụtara na nkwado dị mkpa karịa nkwado maka ọrụ nke ọkọlọtọ ma ọ bụ free coronationcasino.com ọrụ. All support ga-nyere dị na echichi Casino ọkọlọtọ ọrụ omume, usoro na atumatu di.
Ibu ọrụ nke weebụsaịtị Visitors. Echichi Casino adịghị enyocha, na ike nyochaa, niile nke ihe onwunwe, gụnyere kọmputa software, gwa ndị weebụsaịtị, na ike ya mere ịbụ maka na ihe onwunwe si ọdịnaya, -eji ma ọ bụ mmetụta. Site ịwa ahụ weebụsaịtị, Echichi Casino anaghị anọchi anya ma ọ bụ na-enye echiche na ọ endorses ihe e posted, ma ọ bụ na ọ na-ekwere dị otú ahụ ihe onwunwe na-ezi ihe, bara uru ma ọ bụ na-abụghị emerụ. Ọ bụ ọrụ Na-akpachapụ Anya dị ka ọ dị mkpa iji chebe onwe gị na kọmputa gị usoro si nje virus, ikpuru, Trojan inyinya, na ndị ọzọ na-emerụ ma ọ bụ na-ebibi ọdịnaya. The weebụsaịtị ike ịnwe ọdịnaya bụ mkparị, ekwesịghị ekwesị, ma ọ bụ na uzọ ọzọ ifọnke, nakwa dị ka ọdịnaya nwere oru-adabaghị, mperi ndenye ihe wetara emehie, na ndị ọzọ na njehie. The weebụsaịtị nwekwara ihe onwunwe na nke mebiri nzuzo ma ọ bụ ọha ikike, ma ọ bụ infringes na arịa amamihe na ndị ọzọ na proprietary ikike, nke ọzọ, ma ọ bụ na nbudata, Iṅomi ma ọ bụ ojiji nke nke bụ isiokwu ọzọ usoro na ọnọdụ, kwuru ma ọ bụ kwughị. Echichi Casino disclaims ọ bụla ibu ọrụ n'ihi na ihe ọ bụla nsogbu n'ihi na ojiji site ọbịa nke weebụsaịtị, ma ọ bụ ihe ọ bụla na nbudata ndị ọbịa nke ọdịnaya e posted.
Ọdịnaya Ihe na Other nrụọrụ. Anyị enyocha, na ike nyochaa, niile nke ihe onwunwe, gụnyere kọmputa software, na-enye site na weebụsaịtị na webpages ka nke coronationcasino.com njikọ, na na njikọ aka coronationcasino.com. Echichi Casino adịghị ihe ọ bụla na-achịkwa ndị na-abụghị ndị echichi Casino weebụsaịtị na webpages, na bụ ajụjụ maka ihe ha ọdịnaya ma ọ bụ ha were. Site n'ijikọ aka a na-abụghị ndị echichi Casino website ma ọ bụ webpage, Echichi Casino anaghị anọchi anya ma ọ bụ na-enye echiche na ọ endorses ndị dị otú ahụ website ma ọ bụ webpage. Ọ bụ ọrụ Na-akpachapụ Anya dị ka ọ dị mkpa iji chebe onwe gị na kọmputa gị usoro si nje virus, ikpuru, Trojan inyinya, na ndị ọzọ na-emerụ ma ọ bụ na-ebibi ọdịnaya. Echichi Casino disclaims ọ bụla ibu ọrụ n'ihi na ihe ọ bụla nsogbu n'ihi ojiji nke na-abụghị echichi Casino weebụsaịtị na webpages.
Copyright ịda iwu na DMCA N'uba. Dị ka echichi Casino jụrụ ndị ọzọ na-akwanyere ya ikike arịa amamihe, ọ na-akwanyere ndị ikike arịa amamihe nke ndị ọzọ. Ọ bụrụ na i kweere na ihe onwunwe dị na ma ọ bụ na njikọ aka site coronationcasino.com nke mebiri gị nwebisiinka, ị na-ume iji gwa echichi Casino dị na echichi Casino si Digital Narị Afọ Iri Copyright Act (& Quot; DMCA & quot;) Policy. Echichi Casino ga-azaghachi nile dị otú ahụ ọkwa, gụnyere dị ka achọrọ ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị site n'iwepụ di obere ihe onwunwe ma ọ bụ ajọ nkwarụ niile njikọ nke di obere ihe onwunwe. Echichi Casino ga chupu a esenowo si ohere na na-eji nke weebụsaịtị ọ bụrụ na, n'okpuru kwesịrị ekwesị ọnọdụ, esenowo kpebisiri ike na-a megharịa infringer nke nwebiisinka ma ọ bụ ndị ọzọ ikike arịa amamihe nke echichi Casino ma ọ bụ ndị ọzọ. Na ihe banyere ndị dị otú ahụ nchupu, Echichi Casino ga-ọ dịghị ọrụ na-enye a nkwụghachi nke ọ bụla ichekwa na mbụ ugwo echichi Casino.
Arịa ọgụgụ isi. Nke a Agreement adịghị nyefee si echichi Casino gị ọ bụla echichi Casino ma ọ bụ ndị ọzọ na-arịa amamihe, na mma, aha ma mmasị na ndị dị otú ahụ ihe onwunwe ga-anọgide (dị ka n'etiti ọzọ) nanị na echichi Casino. echichi Casino, coronationcasino.com, na coronationcasino.com logo, na ihe ndị ọzọ nile ụghalaahịa, ọrụ akara, ndịna-emeputa na logos eji na njikọ na coronationcasino.com, ma ọ bụ ndị weebụsaịtị bụ ụghalaahịa ma ọ bụ ụghalaahia edenyere nke echichi Casino ma ọ bụ echichi Casino si ikikere. ụghalaahịa ndị ọzọ, ọrụ akara, ndịna-emeputa na logos eji na njikọ na weebụsaịtị wee ibu akara ụghalaahịa nke ndị ọzọ na otu nke atọ. Ojiji nke weebụsaịtị n'emere ị dịghị nri ma ọ bụ ikike mụta nwa ma ọ bụ n'ụzọ iji ihe ọ bụla echichi Casino ma ọ bụ atọ ndị ọzọ ụghalaahịa.
mgbasa ozi. Echichi Casino mee ikike iji gosipụta mgbasa ozi na gị blog ma ọ bụrụ na ị zụrụ otu mgbasa ozi-free na akaụntụ.
Attribution. Echichi Casino mee ikike iji gosipụta Attribution njikọ dị ka 'Blog na coronationcasino.com,'Isiokwu na-ede akwụkwọ, na font Attribution gị blog footer ma ọ bụ ngwaọrụ.
Mmekọ Products. Site rụọ ọrụ a na onye òtù ọlụlụ ngwaahịa (e.g. isiokwu) si onye nke anyị mmekọ, ị na-ekweta na nwunye usoro nke ọrụ. Ị nwere ike ịpụ na ha usoro nke ọrụ n'oge ọ bụla site de-rụọ ọrụ ibe ngwaahịa.
ngalaba aha. Ọ bụrụ na ị na-ịdenye ngalaba aha, na iji ma ọ bụ na-ebufe a na mbụ e debara aha ngalaba aha, Ị na-ekweta na-ekweta na ojiji nke ngalaba aha nwekwara isiokwu ka atumatu nke Internet Corporation n'ihi E Kenyere aha na Ọnụ Ọgụgụ (& Quot; ICANN & quot;), gụnyere ha Ndebanye aha ikike na ọrụ.
mgbanwe. Echichi Casino mee ikike, na naanị ezi uche, gbanwee ma ọ bụ dochie bụla nke a Agreement. Ọ bụ ọrụ gị nyocha nke a Agreement oge maka mgbanwe. Gị wee na ojiji nke ma ọ bụ ohere na weebụsaịtị na-eso ikenye nke ọ bụla mgbanwe a Agreement werekwa nabata ndị mgbanwe. Echichi Casino nwere ike na-, n'ọdịnihu, enye ọhụrụ ọrụ na / ma ọ bụ atụmatụ site weebụsaịtị (na nsonye, ntọhapụ nke ọhụrụ ngwá ọrụ na ego). Dị otú ahụ ọhụrụ atụmatụ na / ma ọ bụ ọrụ ga-n'okpuru usoro na ọnọdụ nke a Agreement.
nchupu. Echichi Casino nwere ike chupu gị ohere niile ma ọ bụ ihe ọ bụla nke weebụsaịtị n'oge ọ bụla, na ma ọ bụ na nkịtị, na ma ọ bụ na-enweghị amamọkwa, irè ozugbo. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị kwụsị a Agreement ma ọ bụ gị coronationcasino.com akaụntụ (ma ọ bụrụ na i nwere otu), ị pụrụ ịbụ nnọọ a kwụsị na iji weebụsaịtị. N'agbanyeghị ihe ndị e kwuru n'elu, ma ọ bụrụ na i nwere a ugwo ọrụ akaụntụ, dị otú ahụ na akaụntụ nwere ike na-kwụsị ịdị irè echichi Casino ma ọ bụrụ na ị na mkpa anụ akwada a Agreement ma ghara iji gwọọ ndị dị otú ahụ iro n'ime iri atọ (30) ụbọchị si echichi Casino mîfiọkke gị ya; bụrụhaala na, Echichi Casino nwere ike kwụsị weebụsaịtị ozugbo dị ka akụkụ nke a n'ozuzu mechie nke anyị na-ejere. All ndokwa nke a Agreement nke ha ọdịdị kwesịrị adị ndụ nchupu ga-adị ndụ nchupu, na nsonye, enweghị mmachi, nwe ndokwa, akwụkwọ ikike disclaimers, indemnity na-agaghị emeli nke ibu.
Disclaimer nke warranties. The weebụsaịtị a na-nyere & quot; ka bụ & quot;. Echichi Casino na suppliers na ikikere ugbu disclaim niile warranties of any kind, egosipụta ma ọ bụ echiche, na nsonye, enweghị mmachi, na warranties of merchantability, mma maka otu nzube na-abụghị ịda iwu. Dighi kwa echichi Casino ma ọ bụ ya suppliers na ikikere, na-eme ka akwụkwọ ikike ọ bụla na weebụsaịtị ga-enwe njehie free ma ọ bụ na ohere thereto ga-aga n'ihu ma ọ bụ Iweputa. Ị ghọtara na ị budata, ma ọ bụ na uzọ ọzọ nweta ọdịnaya ma ọ bụ ọrụ site na, ndị weebụsaịtị na gị onwe gị ezi uche na n'ihe ize ndụ.
Mmachi nke Ibu. Na ọ dịghị ihe a ga echichi Casino, ma ọ bụ ya suppliers ma ọ bụ ikikere, -atụba na-akwanyere ọ bụla isiokwu okwu nke a nkwekọrịta n'okpuru ọ bụla nkwekọrịta, ileghara, echesinụ ibu ma ọ bụ ndị ọzọ na iwu ma ọ bụ equitable tiori maka: (i) ọ bụla pụrụ iche, a na-enwe ma ọ bụ ndị dị emebi obosara; (ii) na-eri nke ị nweta maka dochie na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ; (III) n'ihi na nkwụsị nke eji ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ mmerụ nke data; ma ọ bụ (IV) maka ihe ọ bụla ichekwa na gafere na ụgwọ kwụrụ ị na-echichi Casino n'okpuru a nkwekọrịta n'oge iri na abụọ (12) ọnwa oge tupu kpatara edinam. Echichi Casino agaghị enweta ibu ọ bụla bara ma ọ bụ na-egbu oge ruru ka ihe karịrị ha ihe ezi uche na-achịkwa. Ihe e kwuru n'elu ga-etinye ruo n'ókè iwu machiri ya n'iwu.
General onodi na Akwụkwọ ikike. Ị na-anọchi anya na akwukwo ikpe na (i) ojiji nke weebụsaịtị ga-echesinụ dị na echichi Casino Amụma nzuzo, na nke a Agreement na na niile na ọdabara iwu na ụkpụrụ (gụnyere na-enweghị mmachi ọ bụla iwu obodo ma ọ bụ ụkpụrụ gị mba, ala, obodo, ma ọ bụ ndị ọzọ ndị ọchịchị na mpaghara, banyere online omume na-anabata ọdịnaya, na gụnyere niile na ọdabara iwu banyere nnyefe nke data exported si United States ma ọ bụ na mba ahụ ibi) na (ii) ojiji nke weebụsaịtị agaghị imegide ikike ime nhọrọ ma ọ bụ misappropriate na ikike arịa amamihe nke ọ bụla ọzọ.
Indemnification. Ị na-ekweta indemnify ma jide adịghị njọ echichi Casino, ya ngo, na ndị nyere ya ikikere, na ha na nwoke nduzi, ọrụ nche, ọrụ na mmadụ si na imegide ọ bụla na niile ekwu na mmefu, gụnyere ndị ọkàiwu 'ụgwọ, ịda si ojiji nke weebụsaịtị, gụnyere ma na ọnweghị oke gị mebiri nke a Agreement.
iche. Nke a Agreement werekwa dum nkwekọrịta n'etiti echichi Casino na ị banyere isiokwu okwu hereof, ha ike na a ga gbanwetụrụ site n'iwu e dere mmeghari aka site na ihe ikike onyeisi nke echichi Casino, ma ọ bụ site ikenye site echichi Casino nke a adi version. Ma e wezụga ruo n'ókè n'iwu, ma ọ bụrụ na ọ bụla, -enye ma ọ bụghị na, a Agreement, ọ bụla ohere ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị a ga-achịkwa iwu nke England na Wales, ewepu ya agha nke iwu ndokwa, na kwesịrị ekwesị ebe mgbakọ maka ihe ọ bụla esemokwu ịda si ma ọ bụ metụtara ọ bụla nke otu ga-steti na gọọmenti etiti n'ụlọikpe dị na London, UK. Ma e wezụga n'ihi ekwu maka injunctive ma ọ bụ equitable enyemaka ma ọ bụ na-ekwu banyere ikike arịa amamihe (nke nwere ike na-ada na ihe ọ bụla eru ikpe-enweghị ikenye nke a nkekọ), ịrụ ụka ọ bụla ịda n'okpuru a Agreement ga-mesịrị biri dị na Comprehensive Arbitration Iwu nke n'Ikpe Arbitration na mediation Service, Inc. (& Quot; jams & quot;) site atọ kpeziere họpụtara dị na ndị dị otú ahụ Iwu. The mkpezi ikpe ga-ewere ọnọdụ na London UK, na-asụ Bekee na arbitral mkpebi nwere ike a gbasoro ọ bụla ikpe. Agbasokarị party ọ bụla ihe ma ọ bụ etinyewe na-amanye ha a Agreement ga-isiokwu na-akwụ ụgwọ na ọkàiwu 'ụgwọ. Ọ bụrụ na ọ bụla nke a Agreement na-ẹkenịmde ghara ịdị irè ma ọ bụ unenforceable, na akụkụ a ga-weere ihe na-egosipụta ọzọ 'mbụ nzube, na ndị fọdụrụ òkè ga-anọgide zuru ike na mmetụta. A waiver site ọ ma ndị ọzọ nke ọ bụla okwu ma ọ bụ ọnọdụ a Agreement ma ọ bụ ihe ọ bụla iro-ya nile, ke ekededi ke otu atụ, agaghị waive dị otú ahụ okwu ma ọ bụ ọnọdụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ụdi iro-ya nile. Ị nwere ike ekenye gị ikike n'okpuru nke a Agreement ọ bụla nke na-ezi nma ka, na ekweta ka a agbụ, ya usoro na ọnọdụ; Echichi Casino nwere ike na-ekenye ya ikike n'okpuru nke a Agreement na-enweghị ọnọdụ. Nke a Agreement ga-nkịtị n'elu na ga inure ka abamuru nke ndị ọzọ, ha na-anọchi na kwere nyere.
echichi Casino - GlobaliGaming ("echichi Casino& Quot;) Arụ ọrụ coronationcasino.com na ike na-arụ ọrụ ndị ọzọ na weebụsaịtị. Ọ bụ echichi Casino si iwu na-akwanyere nzuzo gị banyere ozi ọ bụla anyị nwere ike ịnakọta mgbe na-arụ ọrụ anyị weebụsaịtị.
Dị ka ọtụtụ na website rụọ, Echichi Casino nakọtara na-abụghị onwe-akọwapụta ọmụma nke ụdị ndị na-nchọgharị weebụ na sava a na-eme ka dị, dị ka ụdị ihe nchọgharị, asụsụ mmasị, -ekwu banyere saịtị, na ụbọchị na oge nke ọ bụla esenowo arịrịọ. Echichi Casino nzube na-achịkọta ndị na-abụghị onwe-akọwapụta ọmụma bụ mma ịghọta otú echichi Casino ọbịa na-eji ya website. Site n'oge ruo n'oge, Echichi Casino nwere ike hapụ-abụghị onwe-akọwapụta ọmụma na nchịkọta, e.g., site n'ibipụta otu akụkọ na-ewu ewu na ojiji nke website.
Echichi Casino na-anakọta nwere onwe-akọwapụta ozi dị ka Internet Protocol (IP) adreesị maka ite ke ọrụ na maka ọrụ na-ahapụ comments on coronationcasino.com blọọgụ / saịtị. Echichi Casino naanị kwupụta wee banye na ọrụ na onye commenter adreesị IP ndị nọ n'otu ọnọdụ na ọ na-eji wee kwupụta onwe-akọwapụta ọmụma dị ka a kọwara n'okpuru ebe a, ma e wezụga na commenter adreesị IP na adreesị email na-ahụ anya na-mara na ọchịchị nke blog / saịtị ebe comment fọdụrụ.
Achịkọta nke Onwe-Ịmata Ozi
Ụfọdụ ndị ọbịa ka echichi Casino si weebụsaịtị-ahọrọ na-emekọ ihe echichi Casino ihe n'ụzọ na-achọ echichi Casino iji kpokọta onwe-akọwapụta ọmụma. The ego na ụdị ọmụma na echichi Casino achịkọta-adabere na ọdịdị nke ihe na mmekọrịta. Ọmụmaatụ, anyị na-arịọ ndị ọbịa na-edebanye na coronationcasino.com inye a na aha njirimara na adreesị ozi-e. Ndị na-eme azụmahịa na echichi Casino na-jụrụ enye ozi ndị ọzọ, gụnyere dị ka ọ dị mkpa na na ego ozi achọrọ iji hazie ihe ndị azụmahịa. Na nke ọ bụla, Echichi Casino nakọtara ọmụma dị otú ahụ na insofar ka dị mkpa ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị iji mezuo nzube nke esenowo si na mmekọrịta ya na echichi Casino. Echichi Casino ekwughị kpọmkwem-akọwapụta ọmụma ndị ọzọ karịa ka a kọwara n'okpuru ebe a. Na ndị ọbịa nwere ike mgbe niile-ajụ-ezitekwara onwe-akọwapụta ọmụma, na caveat na o nwere ike ime ka ha ghara ekere òkè ụfọdụ website metụtara omume.
Echichi Casino nwere ike ịnakọta nchịkọta gbasara omume nke ndị ọbịa ka ya weebụsaịtị. Echichi Casino nwere ike na-egosipụta ozi a n'ihu ọha ma ọ bụ na-enye ya ndị ọzọ. Otú ọ dị, Echichi Casino ekwughị kpọmkwem-akọwapụta ọmụma ndị ọzọ karịa ka a kọwara n'okpuru ebe a.
Protection of Ụfọdụ Onwe-Ịmata Ozi
Echichi Casino kwupụta nwere onwe-akọwapụta na ya onwe-akọwapụta ọmụma naanị ndị ndị ọrụ ya, ngo na mmekọ na òtù na (i) mkpa ịmara na ozi iji hazie ya na echichi Casino ya isi n'ihi na ọ bụ iji nye ọrụ dị na echichi Casino si weebụsaịtị, na (ii) na-kwetara na ọ bụghị ka igosipụta ya ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ndị ọrụ, ngo na mmekọ òtù nwere ike na-emi odude n'èzí nke ebe obibi gị obodo; site na iji echichi Casino si weebụsaịtị, ị kwenye na nyefe n'ime ihe ndị ahụ ha. Echichi Casino agaghị dọwa ma ọ bụ na-ere nwere onwe-akọwapụta na ya onwe-akọwapụta onye ọ bụla. Ndị ọzọ karịa ya ọrụ, ngo na mmekọ òtù, dị ka akọwara n'elu, Echichi Casino kwupụta nwere onwe-akọwapụta na ya onwe-akọwapụta ihe ọmụma nanị ihe omume a sobpona, ikpe iji ma ọ bụ ọchịchị arịrịọ, ma ọ bụ mgbe echichi Casino kwere na ezi okwukwe na ngosi dị mkpa iji chebe ihe onwunwe ma ọ bụ ikike nke echichi Casino, ọzọ ma ọ bụ ndị ọha na nnukwu. Ọ bụrụ na ị bụ òjìarụ edebàràahā nke echichi Casino website na nwere ọnọ adreesị email, Echichi Casino nwere ike mgbe ụfọdụ-ezitere gị ozi-agwa gị banyere ọhụrụ atụmatụ, rịọ arịrịọ gị nzaghachi, ma ọ bụ nanị na-ị ruo ụbọchị na ihe na-aga na echichi Casino na anyị na ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị na-eziga anyị a arịrịọ (n'ihi na ihe atụ via email ma ọ bụ site na otu nke anyị nzaghachi usoro), anyị na-doputa ikike kwusaanụ ya na iji nyere anyị aka dokwuo anya ma ọ bụ ikwu gị arịrịọ ma ọ bụ ka o nyere anyị na-akwado ọrụ ndị ọzọ. Echichi Casino-ewe nile jikoro mkpa iji chebe megide n'enweghị ikike ohere, ojiji, mgbanwe ma ọ bụ mbibi nke nwere onwe-akọwapụta na ya onwe-akọwapụta ọmụma.
A kuki bụ a eriri nke ọmụma na a website na-echekwa on a esenowo si na kọmputa, na na esenowo si nchọgharị na-enye aka website oge ọ bụla esenowo alaghachi. Echichi Casino-eji kuki iji nyere aka echichi Casino mata na soro ndị ọbịa, ha ojiji nke echichi Casino website, na ha website ohere mmasị. Echichi Casino ọbịa na-adịghị achọ ka nwere kuki etinye na kọmputa ha kwesịrị ịtọ ha nchọgharị ịjụ kuki n'ihu iji echichi Casino si weebụsaịtị, na drawback na akụkụ ụfọdụ nke echichi Casino si weebụsaịtị ghara arụ ọrụ nke ọma na-enweghị enyemaka nke kuki.
Ọ bụrụ na echichi Casino, ma ọ bụ n'ụzọ nile nke ya ihe ala, e nwetara, ma ọ bụ na eleghi anya ihe omume nke na echichi Casino-apụ nke azụmahịa ma ọ bụ abatakwa odida, ọrụ ozi ga-abụ otu n'ime ihe ala na-agafere ma ọ bụ enwetara site a nke atọ. Ị na-ekweta na ndị dị otú ahụ na-enyefe nwere ike ime, na na ọ bụla acquirer nke echichi Casino nwere ike nọgide na-eji ozi nkeonwe gị dị ka e depụtara a iwu.
Mgbasa ozi igosi na bụla nke weebụ anyị nwere ike inye ya ọrụ site mmekọ mgbasa ozi, onye ahụ nwere ike ịtọ kuki. Kuki ndị a ka ndị ad nkesa chọpụta kọmputa gị oge ọ bụla ha ezitere gị otu online advertisement ikpokọta ozi banyere gị ma ọ bụ ndị ọzọ ndị na-eji kọmputa gị. Ozi a na-enye ohere netwọk mgbasa, ihe ndị ọzọ, anapụta mgbasa ozi ezubere iche ha kweere ga-nke kasị adọrọ mmasị gị. A Amụma nzuzo ekpuchi ojiji nke kuki site echichi Casino na anaghị ekpuchi ndị ojiji nke kuki site ọ bụla akpọsa ngwá ahịa.
Amụma nzuzo Mgbanwe
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbanwe ndị ahụ yiri ka obere, Echichi Casino nwere ike ịgbanwe ya Amụma nzuzo site n'oge ruo n'oge, na na echichi Casino si naanị ezi uche. Echichi Casino-agba ume ka ndị ọbịa ka ugboro ugboro elele ibe a maka ihe ọ bụla mgbanwe ndị ya na nzuzo. Ọ bụrụ na ị nwere a coronationcasino.com akaụntụ, ị nwekwara ike na-enweta na-anya na-agwa gị nke mgbanwe ndị a. Gị wee na ojiji nke saịtị a mgbe ọ bụla mgbanwe nke a na nzuzo ga-emekwa gị nabata nke ndị dị otú mgbanwe.
Echichi Casino na-adịghị mmekọ na ọ na-set nke eze ahụ na nwunye. Nwere fun na echichi Casino!
randy.hallcasino @-ele ihe anya ntụpọ com